XEROX WORKCENTRE 3119 ဘို့ကားမောင်းသူ DOWNLOAD - မောင်းသူ - 2019
Xerox Workcentre 3119 ဘို့ drivers တွေကို Download
တစ်ဦး BSOD "ACPI_BIOS_ERROR" စာသားကိုနှင့်အတူတစ်ဦးကို Windows ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပေါ်ပေါက်သောအဆိုးဆုံးအမှားတစ်ခုမှာ။ ယနေ့တွင်ကြှနျုပျတို့သညျဤပျက်ကွက်ပပျောက်ဖို့ရွေးချယ်စရာအားဖြင့်သင်တို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်တယ်။
ပြဿနာများဖြစ်သည့် operating system ကို၏လုပျငနျးအတွက်ကားမောင်းသူပြဿနာများသို့မဟုတ်မူမမှန်အဖြစ် software ကိုဆုံးရှုံးမှုများမှအထိနှင့် Motherboard ကသို့မဟုတ်ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းဟာ့ဒ်ဝဲပျက်ကွက်ပြီး, အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ပေါ်ထွန်းဆွေးနွေးထားပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, မှားယွင်းမှုတစ်ခုနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်များ၏နည်းလမ်းက၎င်း၏ပေါ်ထွန်းခြင်းများ၏အကြောင်းရင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။
Method ကို 1: ယာဉ်မောင်းပဋိပက္ခများကိုဖယ်ရှားခြင်း
ဒီအမှား software ကိုယာဉ်မောင်းများ၏အများဆုံးဖွယ်ရှိအကြောင်းမရှိဆန့်ကျင်ပါလိမ့်မယ်: ဥပမာနှစ်ခုဗားရှင်း, လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းနှင့်လက်မှတ်မထိုးတပ်ဆင်, ဒါမှမဟုတ်ယာဉ်မောင်းဖေါတချို့အကြောင်းပြချက်ရှိကြ၏။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်ကပြဿနာများ၏တရားခံရှာကဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအခါ system ကိုဘွတ်ဖိနပ်နှင့်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်နေချိန်တွင်မှသာဖြစ်နိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။ အဆိုပါ BSOD «အလုပ်»အဆက်မပြတ်ပါလျှင်, ထိုစနစ်ကမှဝင်ရောက်ခွင့်ရအလုပ်မလုပ်ပါဘူး, သင်က၎င်း၏ကျန်းမာရေး restore ပြန်၏နည်းလမ်းများအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာကို: Windows ကိုဆယ်
ယာဉ်မောင်းစမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဥပမာတစ်ခု 10 windose ပြသပါ။
သင်သည်အဘယ်သို့အောက်က link ကိုကူညီလမ်းညွှန်လိမ့်မယ် "ဟုကို Safe Mode ကို" တွင်စနစ် boot ။
Read more: Window များပေါ်တွင် "ကို Safe Mode ကို" ကိုသွားကြဖို့ကိုဘယ်လို
ယင်းနောက်ပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ် "Run ကို" ကီးဘုတ် shortcut ကို ဦးဝင်း + R ကိုထိုအခါစကားလုံးလိုင်းလျှောက်လွှာထဲမှာ mount အတည်ပြု နှင့် button ကို click "အိုကေ".
တစ်ဦးက window ကိုယာဉ်မောင်း Verified tool ကို, ကထဲက option ကိုရွေးချယ် "ထုံးစံ setting များကို Create ... "ထိုအခါစာနယ်ဇင်း "Next ကို".
မှတ် မှလွဲ. , options မှတ်ချက် "အရင်းအမြစ်များ emulator မရှိခြင်း"နှင့်ဆက်လက်။
ဤတွင်မီးမောင်းထိုးပြ "အလိုအလျောက်လက်မှတ်မထိုးယာဉ်မောင်းကို select"ကလစ် "Next ကို" နှင့်စက်တစ် reboot လုပ်ရမည်။
ထိုပြဿနာ (ဖောက်ပြန်တဲ့ module တစ်ခု၏နံပါတ်နှင့်အမည်) ကိုဖြေရှင်းနိုင်မှလိုအပ်သောဒေတာများကိုညွှန်ပြကြလိမ့်မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုဆော့ဖျဝဲလိမ့်မည် "သေမင်း၏အပြာမျက်နှာပြင်" နှင့်အတူပြဿနာများ၏အမှု၌။ သူတို့ကိုရေးချကာဆက်စပ်ပစ္စည်းပျက်ယွင်းနေဆော့ဖ်ဝဲအတိအကျချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်များအတွက်အင်တာနက်ရှာဖွေ။ အဆိုပါ BSOD ထင်ရှားမထားလျှင်,6ခြေလှမ်းစစ်ဆေးမှုများအပေါ်ကိုထပ် 3-6 ခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာပေမယ့်ဒီအချိန် "စာရင်းထဲကတစ်ဦးကားမောင်းသူကို Select လုပ်ပါ".
ဆော့ဖျဝဲများ၏စာရင်းအတွက်ပံ့ပိုးပေးမမှတ်သားသည်အဘယ်မှာရှိလူအပေါင်းတို့သည်ရာထူး, tick "Microsoft မှကော်ပိုရေးရှင်း"ထိုအခါဒရိုင်ဘာစစ်ဆေးနေများအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုပြန်လုပ်ပါ။
ဖယ်ရှားမယ်ပျက်ကွက်ဒရိုင်ဘာနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည် "Device Manager": ရိုးရှင်းစွာအက, snap-in ကိုဖွင့်လှစ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏တပ်မက်လိုချင်သောဂုဏ်သတ္တိများကိုဆောင် ခဲ့. , ထို tab ကိုသွားပါ "ယာဉ်မောင်း" နှင့် button ကို click "ကိုဖျက်".
ပေါ်ထွန်းခြင်း ACPI_BIOS_ERROR ၏အကြောင်းရင်းမှာယာဉ်မောင်းနှင့်အတူပြဿနာများဖြစ်လျှင်အထက်ပါအဆင့်များကသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကူညီပေးပါမည်။ ထိုပြဿနာကိုဖြစ်ပေါ်, ဒါမှမဟုတ်စစ်ဆေးမှုများအဘယ်သူမျှမကျရှုံးပြသပါလျှင် - အပေါ်ကိုဖတ်ပါ။
Method ကို 2: Update ကို BIOS ကို
များစွာသောမူကွဲ ACPI mode ကိုထောကျပံ့ပေးပါဘူး, ဘာကွောငျ့လဲသတ်မှတ်ထားတဲ့အမှားလည်းမရှိ - မကြာခဏပြဿနာက BIOS ကိုခံစားရစေပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူများ၏လတ်တလောစာရင်းစစ်ဟာ bug တွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းနှင့် features အသစ်တွေကိုမိတ်ဆက်မှာကဲ့သို့ Motherboard က၏ firmware ကိုကပုံမှန် update လုပ်ဖို့နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
Read more:, BIOS update လုပ်ဖို့ကဘယ်လို
Method ကို 3: BIOS ကို Parameter settings ကို
ကိုက်ညီမှုတန်ဖိုးများပေါ်ထွန်းခြင်း ACPI_BIOS_ERROR ဖြစ်ပေါ်စေသည့်အခါအချို့အပိုပါဝါ options များ - ဒါ့အပြင်ပြဿနာမကြာခဏမမှန်ကန်ကြောင်း configuration ကို software ကို "ဘုတ်" တွင်တည်ရှိသည်။ တစ်ဦးကပိုကောင်းတဲ့ option ကိုမှန်ကန်သော parameters တွေကို install လုပ်ပါသို့မဟုတ်စက်ရုံတန်ဖိုးများသူတို့ကို reset ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်က link ကိုမှန်ကန်စွာဒီစစ်ဆင်ရေးလုပ်ဖို့ကိုသင်ကူညီလမ်းညွှန်ပါလိမ့်မယ်။
ACPI များအတွက် BIOS ကို configure လုပ်ဖို့ဘယ်လို: ဆက်ဖတ်ရန်
Method ကို 4: RAM ကိုစမ်းသပ်ခြင်း
Viewed ပျက်ကွက်မှုကြောင့် RAM ကို module တွေနှင့်အတူပြဿနာများပေါ်ပေါက်နိုင်သည် - မှားယွင်းမှုတစ်ခုအခွအေနေမကြာခဏ slats တဦး၏ပျက်ကွက်၏ပထမဦးဆုံးနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဤပြဿနာကိုရှောင်ရှားရန်, တန်ဖိုးရှိမှတ်ဉာဏ်အပေါ်ကို manual ထဲမှာအကြံပြုနည်းလမ်းများထဲကတစ်ခုကိုထုတ်စစ်ဆေးနေ။
ယင်း၏ဖျက်သိမ်းရေးမရှိတစ်လောကလုံးနည်းလမ်းရှိသေး၏အဘယ်ကြောင့် ACPI_BIOS_ERROR အမှားအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်များ, ဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ်ဟာ့ဒ်ဝဲအဘို့တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အများဆုံးအစွန်းရောက်အမှု၌, သင် operating system ကိုပြန်လည်ကြိုးစားနိုင်ပါ။